avylavitra · Desambra 2010 · Global Voices teny Malagasy
avylavitra · Desambra, 2010
Lahatsoratra farany an'i avylavitra tamin'ny Desambra, 2010
Azia Afovoany sy Kaokazy 31 Desambra 2010
Hatrany amin'ny fisasahan'ny taona 2000 tany i Kazakhstan no efa nikendry fatratra ny hitarika ny Fikambanam-piaraha-miasa sy Filaminana ao Eraopa, na OSCE, fikambanana iraisam-pirenena isan'ny lehibe indrindra mpandàla ny demaokrasia eo amin'io kaontinanta io. Betsaka tamin'ireo firenena mpikambana no nanatsiny ilay fikasana noho ny faharatsian'ny fanajàna zon'olombelona misy any Kazakhstan.
Lalao baolina soccer Malezia-Indonezia nivadika ho fifanaovana teny mahery (Taim-bava)
Azia Atsinanana 31 Desambra 2010
Malezia sy Indonezia no ekipa roa tonga tamin'ny famaranana ny lalao fiadina izay ho tompon-dakan'ny Asean Football Federation Suzuki Cup. Tenifototra roa no namadika azy ity ho lasa lohahevitra teo anivon'ny vohikala, ‘Hate Malaysia’ sy ‘#loveindonesia’ satria naneho ny tsy fahafaliany tamin'ny faharesen'ny tarika notohanany tamin'ny lalao fihodinana voalohany ireo Indoneziana mponin'ny aterineto
Nomad Green: Amoron-tevan'ny faharavan'ny tontolo iainana i Mongolia
nomad green 30 Desambra 2010
Ireo olon-tsotra mpampita vaovao ao amin'ny Nomad Green dia miezaka manentana mikasika ny fahasimban'ny tontolo iainana ao amin'ny firenen-dry zareo amin'ny fitodihana amin'ireo vahoaka Mongoliana sy ny mpamaky avy amin'izao tontolo izao. Taterin-dry zareo ny loza mitatao zakain'ny tontolo iainana ao Mongolia noho ny fiovan'ny maripana erantany sy ny ataon'ny olombelona.
Azia Atsinanana 29 Desambra 2010
Misy dikamitovy (clones) nalaina avy amin'ny Wikileaks any Azia Atsimo Atsinanana: Thaileaks avy ao Thailand, Indoleaks ao Indonesia ary PinoyLeaks avy any Philippines. Ireo vohikala ireo dia natsangana : novelomina indray tamin'ity volana ity ho fanohanana ny asa natomboky ny Wikileaks ary hamoahana ny antontan-taratasy tsiambaratelon'ny governemanta any amin'ny fireneny tsirairay avy.
Tonizia: Korontana nateraky ny fikasana hamono tena nataonà lehilahy iray tsy an'asa
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 28 Desambra 2010
Toniziana tsy an'asa iray no nikasa handoro ny tenany ho fanehoana tsy fankasitrahana amin'ny tsy fahitàny asa, ka niteraka onjan-kerisetra tao an-toerana sy fanehoana firaisankina ombam-panohanana teo anivon'ny tambajotra sosialy. Raha mbola tsy fantatra mazava izay niafaran'i Mohamed Bouazizi, 26 taona, avy ao Sidi Bouzid, faritra atsimon'i Tonizia, nopaingorin'ireo Toniziana mpampiasa aterineto ilay zava-nitranga mba hilazàna ny tsy fisian'ny asa, ny kolikoly sy ny fitsitontongan'ny zo maha-olona ao amin'ny firenen-dry zareo.
Nepal: Mpanao gazety notafihana noho ny fanaovana tatitra iraisam-pirenena
Nepal 25 Desambra 2010
Shreedeep Rayamajhi, mpanao gazety Nepale dia sady mpanao gazety no mpitoraka bilaogy matihanina, manoratra ho ana Fikambanana Fampahalalam-baovao iraisam-pirenena toy ny GroundReport sy ny CNN's iReport. Rayamajhi dia manoratra ihany koa ho ana gazety an-tsoratra manana ny lanjany ao an-toerana ihany, toy ny ‘the Nepal Travellers Publication’, sady miasa ho...
Tohano ny Global Voices: Ampio ho lasa toerana mifandrohy bebe kokoa izao tontolo izao
20 Desambra 2010
Na eo aza ny fanohanana maro avy amin'ireo mpanolo-tena entanim-pitiavana, mila fanohanana ara-bola ihany izahay mba hampiodinana sy hampiroboroboana ity tetikasa ity. Nanjary taninketsa ho ana tetikasa goavana sy mitondra fivoarana nanerana ny tany ny Global Voices. Rehefa manome fanampiana ianao, tsy hoe manohana fotsiny ireo vohikala 20 efa novokarinay (amina tenim-pirenena 17 !) - fa manosika anay koa ianao hahatanteraka ny fanohanana ireo tetikasam-pampivoarana sy fanandràmana mba hahazoana antoka fa ny tetikasanay dia ho afaka hitohy hiara-dàlana amin'ny fiovàna mihazakazaka, tsy mitsahatry ny aterineto azo entina mandehandeha.
Syria: Avelao hirotsaka ny ranomandry!
Toetrandro tsy nahazatra loatra narahan-tafiotra no nanamarika ny herinandro lasa teo tany amin'ny faritra maro tany Levant, raha nirotsaka ny orana efa nandrasana ela sy ny ranomandry tsy nampoizina nandrakotra izay rehetra taka-maso. Tao an-drenivohitra Siriana, sambany rakotra ranomandry indray ny arabe rehetra raha tsy nisy izany an-taona maro. Tao Damas, na dia misy ranomandry tsindraindray ihany aza, tsy dia mijanona ela eo ambonin'ny tany ireny.
Israely: Tanin'ny Afo sy ny Ranomandry
Toetrandro ririnina henjana tokoa no namely ny faritra isan'ny lehibe indrindra tao Israely tamin'ity herinandro ity (Avy amin'ny mpandika: Lahatsoratra nivoaka tamin'ny 15 Desambra 2010), narahana tafio-drivotra nahery vaika, orana ary tafiotran-dranomandry, nitera-pahavoazana nanerana ny firenena manontolo. Tany Avartra, rakotra ranomandry matevina izay tsy mbola hita teto amin'ny firenena tao anatin'ny 20 taona ny tendrombohitra Hermon. Izany dia andro vitsy taorian'ny nandravàn'ny doro ala ny faritry ny tanànan'i Carmel, izay niteraka famoizana aina 43 sy fahasimban-javatra vinavinaina ho hatramin'ny 100 na 120 tapitrika sekely.